WOWOW 8 Inch Centerset Bridge Gold Kitchen Faucet Brass leh Side Sprayer
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Buundada Rustic Bridge Jikada / WOWOW 8 Inch Centerset Bridge Bridge Kitchen Kitchen Faucet Brass leh Side Sprayer
Laba Qaboojiye Qasabada Biyaha -Qasabadda jikada buundada waxay leedahay qaab-gacmeed 2-gacmeed waxayna la timaaddaa tubooyin sahay ah (qabow & kulul), kaas oo gacan ka geysan kara xakameynta mugga biyaha iyo heerkulka si sax ah. Qaansada sare ee 360 ​​° qasabadda wareegga sidoo kale waxay ku habboon tahay weel -biyoodka.
Dhisida naxaas adag -Buundada biriijka oo aad u culus waxay ka samaysan tahay naxaas adag oo culeyskeedu yahay 7.76 Ibs. Qasabadda weelka naxaasta leh ee leh dahabka la jajabiyey waa miridhku, daxalka, u adkaysiga daadinta, wuxuuna hubiyaa badbaadada biyaha iyo cimri dheer.
Buufiye Dhinaceedka Faashadda leh Tuubada La Jiido -Hal riixitaan oo badhan ah, buufiyeha dhinaca naxaasta ee cadaadiska sarreeya ayaa ku buufin kara durdur xoog leh oo biyo ah si uu u nadiifiyo suxuunta iyo wasakhda geeska. Tuubada lagu daray waxaa la soo jiidi karaa ilaa 59 inji, taas oo fudud in la nadiifiyo meel kasta oo ku wareegsan saxanka.
Rakibaadda Easy - Qasabadda jikada naxaasta ah ee naxaasta ah waa mid aad ugu qurux badan jikadaada. Qasabadda jikada gurracan waxay la timaadaa dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah iyo tilmaamaha isticmaalaha, taas oo fududeynaysa rakibidda 30 daqiiqo.
Adeegga macaamiisha -Buundada 8 inch buunshaha jikada dahabka ah ayaa ku raaxaysata 90 maalmood oo soo noqosho xaddidan leh iyo dammaanad 5 sano ah. Haddii ay jiraan wax su'aal ah oo ku saabsan qasabadda biriijka naxaasta ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir, waxaan aad ugu farxi lahayn inaan soo bandhigno xal.
SKU: 23115A1G Categories: Buundada Rustic Bridge Jikada, Qubeyska jikada Tags: Bridge, Dahab dahab ah
17.44 x 13.31 x 2.87 inji
WOWOW Gaadhiga Bixin-Koobka Kala-baxa ee Kusoo Kordha F ...
La iibiyey: 41